တကိုယ်တော်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ D.O. ပြောပြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ Solo album အကြောင်း | News Bar Myanmar
တကိုယ်တော်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ အလုပ်များနေတဲ့ D.O. ပြောပြခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ Solo album အကြောင်း
EXO အဖွဲ့ဝင် D.O. ဟာ ဒီနှစ််ရဲ့ အစောပိုင်း January လ 25 ရက်နေ့မှာ စစ်မှုထမ်းတာဝန်ပြီးဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Active-duty soldier တာဝန်ကို တစ်နှစ်နဲ့6လ တောင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်မှုထမ်းပြီးပြီးချင်း V live လွှင့်ခဲ့ပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ပါတယ်။ V live ထဲမှာ သူစစ်မှုထမ်းမဝင်ခင် ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ သူ့ရဲ့ solo song “That’s Okay” ကိုဆိုပြခဲ့ပါတယ်။
Fan တွေက သူ့ရဲ့ အနာဂတ်အစီအစဉ်တွေကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့ D.O. ဟာ သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေကို EXO L တွေကို ချပြချင်ကြောင်း ၊ ထို့အတွက် အလုပ်တွေကြိုးကြိုးစားလုပ်နေသလို သူ့ရဲ့ သီချင်းတွေကလည်း ပြီးလုနီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ solo album ထွက်ရှိဖို့ရက်ကတော့ မသေချာသေးဖူး ဆိုပြီး ထို Vlive မှာ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
လ ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ June လ 10 ရက်နေ့မှာ D.O. ဟာ သူ့ရဲ့ solo album ပြီးစီးနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း Fan တွေကို Bubble Chat ကနေ တဆင့် ခုလို အသိပေးခဲ့ပါတယ်။
“ကျွန်တော်ရဲ့ solo album အတွက် ပြင်ဆင်ပြီးတာ ကြာပါပြီ။ ခု album ထွက်ရှိလာဖို့ အတူစောင့်ကြရအောင်။ ကျွန်တော်တော့ အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေပါတယ်။ ဒီလိုတစ်ယောက်တည်း ပြင်ဆင်ရတာ ပထမဆုံး ဖြစ်တာမို့ ဘယ်လိုနေမလည်းမသိ သဘောကျကြပါ့မလားလို့ တွေးပူမိတယ်။ အရမ်းကြီး မျှော်လင့်မထားကြပါနဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဒီ့ထက် ပိုကြိုးစားပါ့မယ်။”
D.O. ရဲ့ solo album ထွက်ရှိလာခဲ့ရင် D.O. ဟာ EXO member တွေထဲမှာ solo album ထုတ်နိုင်သူ ၆ ယောက်မြောက် member ဖြစ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိကတော့ Chen, Baekhyun, Lay, Suho, Kai အစရှိတဲ့ member တွေက solo album အနည်းဆုံး တခွေလောက်တော့ အသီးသီးထုတ်ထားပြီး အောင်မြင်မှုတွေလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
D.O. ဟာ အဆိုပိုင်းမှာ main Vocal ဖြစ်တာနဲ့ အညီ single song တွေဆိုထားရုံ သာမက ခုဆို Solo album ပါ ထုတ်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ album က နောက်လထဲလောက် ထွက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဆိုပိုင်းမှာအပြင် D.O. ဟာ သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုရင် သူ့ရဲ့ ဆံပင်ကိုပါ ညှပ်ပစ်ပြီး ကတုံးတုံးတဲ့အထိပါ။
ကြိုးစားမှုရဲ့ အသီးအပွင့်ရလဒ် သရုပ်ဆောင်ဆုတွေလည်း ရခဲ့ရုံသာမက ခုနောက်ပိုင်းလည်း ရိုက်ဖို့ ဇာတ်ကားတွေအများကြီး ကမ်းလှမ်းထားခြင်းခံထားရပါတယ်။ ခုလက်ရှိ “The Moon” movie ကို June လ ၆ ရက်နေ့က စပြီးရိုက်ကူးနေကြောင်း သိရပါတယ်။
Next JTBC ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်နဲ့ ၃ နှစ်ကြာမှ သရုပ်​ဆောင်အဖြစ် ပြန်လည်မြင်​တွေ့ရ​တော့မယ့် Joy »
Previous « TC Candler’s “100 Most Beautiful Faces” အတွက် စကာတင်ဝင်နေတဲ့ “Big 4” Idol များ